Kasị Ọkachamara na Comprehensive Analysis On Light okomoko!
Home / Imepụta ime ụlọ / Kasị Ọkachamara na Comprehensive Analysis On Light okomoko!
2020 / 10 / 18 nhazi ọkwaImepụta ime ụlọ 1305 0
Extradị ọkụ dị oke ọkụ bụ ụdị imewe, kamakwa ụzọ ndụ, ọ na-elekwasị anya na ndụ nke ndụ dị mfe, nke dị mma, nke dị ala na nke ejidere, ebe ọ na-efunahụ ndị ugwu na okomoko. Ihe a na-akpọ oke oke, dị ka aha ya pụtara, bụ "okomoko dị oke ọnụ" a pụkwara iwere ya dị ka "okomoko dị ala".
Etu aga - esi Jikwaa Style Of Extravagant Style Of Design? Nkọwa Na Mpaghara 4.
Chọpụta verallda Niile Na Ìhè Na Extravagant Style
Ihe Ise A Na-ejikarị Eme Ihe Maka Ìhè Na Extdị Ncha
Ọtụtụ ụdị agba agba agba agba agba agba agba
Anddị Ìhè Na rabawanye Eke na Otherdị Ndị Ọzọ nke Fusion Design
Ìhè Na rabawanye N'ozuzu Style
Ifufe oke oke ikuku dị mfe dịka ụda, site na arịa mara mma mara mma, na-ekpughe ezigbo uto. Ramebiga ihe ókè dabara adaba maka ndị otu na-eto eto, ọ bụ ejiji, mara mma, ọkụ. More nụchara anụcha karịa minimalist, ihe nkịtị karịa okomoko. Ochie oyi ma ọ bụ dị ọhụrụ ma dị ọcha.
Ihe Ise A Na-ahụkarị Maka Ifufe nke Na-enwu Ọkụ
Chụso ụdị okomoko iji mepụta usoro kachasị dị mfe maka ụdị okomoko. Ihe dị mfe nke styling bụ inye okomoko nke ihe, ihe a na-akpọ okomoko nke ihe apụtaghị ọdịnala ọdịnala dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ, mana ọ na-ezo aka n'echiche dị ebube nke ihe ahụ n'onwe ya. Ihe ise a na-ahụkarị bụ: akpụkpọ anụ, ọla, ajị anụ, mabụl na velvet.
Nke mbụ, akpụkpọ anụ, ihe akpụkpọ anụ na-adịkarị ka ọ dị mma ma dị mma, site na echiche mara mma, akpụkpọ anụ nwere ụdị pụrụ iche na ọka, bụ otu n'ime njirimara nke ndụ okomoko.
Ihe na-esote bụ ọla, ọla kọpa, ígwè bụ ihe nnọchianya karịsịa, ma e jiri ya tụnyere nke mbụ gilding, gilding, gilding ga-ọzọ mara, ma n'otu oge ahụ o nwere a pụrụ iche expressive, nwere ike jirichaa visual mmetụta. Ngwurugwu ọla kọpa Matte bụ ngosipụta nke ìhè, oke oke na enweghị mmetụta.
Ọ na-adịkarị, a gaghị eji ọla mee ihe n'ọtụtụ buru ibu, ụdị oke ọgbara ọhụụ, a na-eji ọla dị ka ihe ịchọ mma, dị ka ihe eji achọ ụlọ mma, nkuku, ọla, wdg.
Nke atọ bụ ajị anụ, ajị anụ yiri mink, ajị anụ ajị anụ, ajị anụ, na-anọchi anya ndị mara mma ma mara mma, ajị anụ na aka nwekwara ike imepụta mmetụta nke ọgaranya, anyị na-akpọ ya mmetụta nke ederede, n'ezie, iji na-achụso gburugburu ebe obibi, anyị nwere ike họrọ ụfọdụ wuru aji nwekwara ike ịmepụta ìhè na-emebiga ihe ókè ikuku.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ iji ọtụtụ mabul. N'ezie, a na-eji marble eme ihe maka ebe a na-edebe ọtụtụ ihe eji achọ mma ugbu a.
N'ikpeazụ, ihe a na-ahụkarị n'ụdị ọkụ dị velvet. Nke a velvet na suede ákwà na-abụkarị ihe adịchaghị ihe onwunwe dị ka mma. Ihe a na - eme ka obi dị na onyinye sofa na ikuku nke okomoko.
Agba abịa Of Light Okomoko Style
Ka anyị kee agba ejiri na oghere dị na agba na ụda olu (nke a nụchara anụcha ma mee ka ọ dịrị ha mfe nghọta).
Extradị ụdị oke ọkụ ga-ahọrọkarị agba na-anọpụ iche nke nwere ụdị isi awọ dị elu, dị ka kamel ọkụ, ọdụ́, mmiri ara ehi curry. Ndabere agba nwere ike ịbụ ọchịchịrị ma ọ bụ ìhè, na ga-ike dị iche iche mmetụta nke ikuku
Ngwoolu na agba
A na-ejikarị ọla ọcha, ọlaọcha, oji, na ọcha mee ihe àgwà ndị na-agba ume. I nwekwara ike iji ụfọdụ agba siri ike jupụta na mbara ikuku. Dịka ọmụmaatụ, na foto dị n'okpuru, a na-eji acha anụnụ anụnụ dị ka ụda olu, nke na-eme ka ị dị ọhụrụ na oge gboo
Light na Extravagant Style ngwakọta na ụdị ndị ọzọ
Utu okomoko bu uzo di iche-iche nke enwere ike igwakota ya na udiri ihe di iche iche, nke ejikoro na nke ndi America, na-eweta obi uto na obi iru ala, agwakọta ya na uzo ndi China, ejiji oriental fashionable.
Onweghi uzo puru idi ka ihe onwu onwu, ya na ihe obula kwesiri ntughari ya na milligram. Agbanyeghi na akpọrọ aha ha dika ụdị okomoko, enwere ụfọdụ na-elekwasị anya. Okwu abụọ a kpọtụrụ aha na mbụ bụ "retro cool" na "dị ọhụrụ ma dị ọcha". Anyị nwere ike iji ha dị ka okporo osisi abụọ nke okomoko. N'etiti mkpara abụọ ahụ ịkesa.
Ọzọkwa bụ ụdị oke oke. Ihe mbụ mere ochie, nke ikpeazụ bụ oge a, mesiri ike dị iche iche. Otu ụkpụrụ. Xdị okomoko abụghị nke onwe, ọ bụrụhaala na ị ghọtara isi ihe dị oke ọnụ, ụdị a nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche.